ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်ရောက်သောအခါ၊ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသောအကြောင်းအရာများ၏အရည်အသွေးမှာထိတ်လန့်စရာအနည်းငယ်ကြီးမားလိမ့်မည်။ အင်တာနက်ရဲ့လိင်ဂိမ်းတွေဟာတော်တော်ပျင်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်အချက်နှင့်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ဂရပ်ဖစ်လည်းတော်တော်လေးရိုင်းခဲ့ကြသည်,ထက်ဘာမျှမပို. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မဆိုညစ်ညမ်းပြွန်ကကမ်းလှမ်းညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံကိုထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏နေထိုင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့စေမည်သည့်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။, ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်မှဂိမ်းအားလုံးကိုဖြောင့်စွာကြည့်ရှုစေသောနည်းပညာအသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတည်ဆောက်ထားသောညစ်ညမ်းဂိမ်းများ၏မျိုးဆက်သစ်နှင့်အတူလာသည်။
ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးမီယာညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်အဖျားခတ်နေသောဤအသစ်စုဆောင်းမှုယခုအချိန်တွင်အပေါငျးတို့သအပူဆုံးဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂရပ်ဖစ်အပြင်ဂိမ်းတွေဟာပိုပြီးအဆင့်မြင့်ပြီးလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ပုံပေါ်အောင်ကူညီပေးနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုအင်ဂျင်တွေလည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ ပင်အသံသည်ဤဂိမ်းအသစ်အတွက်ပိုကောင်းပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,ငါတို့သည်သင်တို့အနာရောဂါနှင့်စပ်လျဉ်းရှိစေခြင်းငှါအားလုံးကြင်နာနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်ဂိမ်း၏ကြီးမားသောစာကြည့်တိုက်နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့အဆုံးစွန်မေမေကလိင်အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်,ငါတို့သည်သေချာဒီဆိုက်ပေါ်မှာရှိသည်။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအားလုံးသည်ဂိမ်းများကိုအခမဲ့သင်တို့အဘို့အလာကြသည်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ကစားစတင်မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းတစုံတခုကိုဒေါင်းလုဒ်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤသည်တစ်ခုလုံးကိုပလက်ဖောင်းအားလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူမှပွင့်လင်းသည်။ သင်အသက် ၁၈ နှစ်သို့မဟုတ်အသက်ကြီးကြောင်းအတည်ပြုခြင်းသည်ဤဂိမ်းကစားခြင်းမပြုမီသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကဒီမှာအရာအားလုံးပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုသေချာပါသည်။ ကစားလာနှင့်ပျော်စရာရှိသည်!
အကောင်းဆုံးမီနူးဂိမ်းဝဘ်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးမီနူးကမ်းလှမ်းသောဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါယခုအချိန်တွင်၏အပူဆုံးကျိန်းဝပ်ကြယ်များပါ ၀ င်သည့် ၄ ကီလိုနှင့်ဗရိုမီတာညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များရှိကြောင်းငါသိ၏၊သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုသင်ပိုမိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာလမ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှကြံ့အချို့ကိုခံစားနိုင်သည့်အတွက်အမာခံလိင်ဂိမ်း၏အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုနှင့်အတူလာသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အဓိကအမျိုးအစားကနေဂိမ်းရှိသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကသင်ချင်သောသူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ဤမျှလောက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုရလိမ့်မည်သည့်အတွက်လိင်အဖြစ်လာမယ့်နေကြသည်။, သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်သင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်သူတို့၏တီကောင်များနှင့်ခေါင်းကြားတွင်နို့စို့နိုင်သည်။ အဲဒီဂိမ်းထဲကဇာတ်ကောင်တွေကလည်းစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးအခြားဂိမ်းတွေကတော့နာမည်ကြီးကာတွန်းတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ကာတွန်းကားတွေစတဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လာကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအပိုင်းကိုသင်အတွင်းမှရိုင်းဆုံးအဲလစ်ဇဘက်ပုံပြင်များအချို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားရ၌စာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းဇာတ်လမ်းသည်ဤဂိမ်းများတွင်ပြန်လည်ပျက်ပြယ်ပုံကိုရှေးခယျြရနှင့်လူတိုင်းအတွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဇာတ်သိမ်းရှိပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။ နှင့်လမ်းအများကြီးပိုရှိပါတယ်။ ရုံလာနှင့်စူးစမ်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါငျးတို့သဂိမ်းအပြည့်အဝအရှည်လာမယ့်နေကြသည်သူတို့အားလုံးအရည်အသွေးဖြန့်ချိဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကမတိုင်မီအခမဲ့ကစားခဲ့ကြဖူးဘူး။ သို့သော်သို့ရာတွင်,ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးမီနူးဂိမ်းအပေါ်ပျော်စရာပူးပေါင်းဖို့လိုသူမည်သူမဆိုအခမဲ့အဘို့ထိုသူတို့အားလုံးဆက်ကပ်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုညစ်ညမ်းသင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်သင်ထံသို့လာကြ၏။ ကျနော်တို့ရရှိနိုင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ကြောင်းဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်,ဒါကြောင့်သင်မစိုးရိမ်နှင့်အတူကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်သူတို့ကိုကစားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအမာခံဂိမ်းကစားခြင်းကိုခံစားခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်အောင်ကျနော်တို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါ်အချို့သောအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်ပေါင်းစည်း,သင်တို့၏မီလိုဆန္ဒများအကြောင်းကိုအားလုံးဆွေးနွေးခြင်း။, ဒီညဒီအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ!